Dhaqan: Qoraal La,aantu Qof Jiray Inkirtaa! – Rasaasa News
Dhaqan: Qoraal La,aantu Qof Jiray Inkirtaa!
May 4, 2014 aantu Qof Jiray Inkirtaa!, Qoraal La
Malaayiinta ruux ee dunida ku nool, tiro yar oo ka mid ah, ayaa mutaysata in magacoodu caan noqodo, kuwaas oo bulshada kaga soo dhax baxa wax qabad iyo karti iyaga u gaar ah, kaas oo lagu xasuusto kolka ay dunida dhaafaan. Kuwo waa la kohdaa, kuwana waa la mahadiyaa, kuwana waa lagu madadaashaa.
Boqolaal ruux oo Somali ah, oo la hayo sheekooyinkoodi iyo waxyaabihii ay dadka u dhaafeen, ayey adagtahay in la rumeeyo in ay ahaayeen dad jira, maadaama aan wax qoraal ah oo lagu rumaysto laga haynin. [Dadka Jabaanku hadaadan tusin sawirka sida ay wax u dhaceen kuma rumaysanayaan].
Arartu intaa ha iggaga ekaato una jeedsado ujeedada arartayda oo ah shakhsi caan ku ah dadka somalida, kaas oo kaga tagay xusuus dheer iyo madadaalo sheekooyin khiyaali ah, kuwaas oo aan qorayn, laakiin dhagaysadkooda ayna dhaguhu ka daalin.
Shakhsigaas oo ka soo jeeda degaanka Somalida [Ogaden], gaar ahaan degaankii loo aqoon jiray Lehelow, oo maanta ka kooban saddex gabal oo daris ah. Waxaa uu ahaa madadaaliye caan ah, oo talaabada uu qaadaba ka samayn jiray sheeko yaab leh oo ay dadku dhagaha u raaciyaan. Way yar yihiin sheekooyinka laga hayo ee jiilba jiil u gubiyey, shakina kuma jiro in ay lumeen kuwa badan, taas oo ay ugu wacan tahay nasiib darada qoraal la,aanta ee bulshadeena taariikhda ka moora duugtay.
Sheekooyinka madadaalada ah ee laga hayo waxay dhamaantood yihiin, kuwa uu sameeyey, kuwaas oo ku salaysnaa waxyaabo aan dhici karin. Gadaal baan u dhigan magaca sheekaalowge: maalin maalmaha ka mid ah oo reerku saban barwaaqo ah ku jiro. Xili barqin ah oo xoolihii la foofiyey oo ragii ka soo noqday xoolaha hagaajintooda iyo dardaaranka caruurta xoolaha raacay ay kabdhoodka fadhiyaan oo is xujayn iyo xifaaltan la isku xadayo ayuu saaxiibkii Hure sheeko ku xad is yidhi.
Bari baa anoo safara waxaan ku soo baxay Wan wayn Ilaahayba Wayne oo Waaxide, waynan wuxuu ka qabo badhidiisu labo buurood dhexdood bay qabsatay, Wanka in la qalo ayaa loo diyaarinayey, Distida loo diyaariyey in hilibkiisa lagu kariyo waxaa xalayey 200 nin! Kolkuu intaa yidhi, ayaa waxaa gartay in hadalku ku socday sheekaale, hadal ma dhibee wuxuu yidhi Raga Distida xalayey ayaan ka mid ahaa! ma hadal baa yaal.
Biixi Hagaag Been-hawaas waa ninka aan kor kaga sheekaynay waxaana uu ahaa nin caan ka ah degaanada Somalida daraf kasta. Magaciisu wuxuu gaadhay degaano uusan arag daayee waligii maqal, wanaagsanaan lahaydaa in qoraal ka hadhi lahaa Biixi Haggaag oo ku magac dheeraa [Been-hawaas]. Dad badan baa waxay u haystaan in Been-hawaaska oo ay sheekooyinkiisa maqlaan uu yahay uun wax la sameeyey, sida dad badan oo Somali ah ay u rumaysan yihiin in Cigaal Shidaad yahay ruux aan jirin.
Halkaas igula nasta lana socda taxa sheekooyinka Biixi Haggaag Been-hawaas.
Madaxweyne Sayid Cabdi oo Shalay la Kulmay R/wasaaraha Dalka Mudane Meles